Filestage: Atsaharo ny fizotran'ny horonan-tsary sy ny fizotranao | Martech Zone
Sabotsy 21 Novambra 2015 Alahady, Novambra 22, 2015 Douglas Karr
Niasa tamina horonantsary manazava izahay nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay, ary nandeha tsara dia tsara tokoa na dia eo aza ny fanangonana vondrona talenta dimy - ny mpanjifa, ny mpanoratra an-tsoratra, ny mpanao sary, ny manaitaitra, ary ny feo manome talenta. Ireo dia faritra mihetsiketsika be dia be!
Ny ankabeazan'ny fizotrany dia atolotra amin'ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa rehefa mandroso amin'ilay dingana isika mba hahafahantsika ho lasa sarotra. Eo anelanelan'ny manokana, voaaro amin'ny teny miafina Vimeo famoahana, mailaka ary rafitra fitantanana tetik'asa, mandroso izahay ary mamita ny fomba.
Amin'ny tetikasanay manaraka, mety hisoratra anarana amin'ny Filestage fotsiny isika! Filestage dia fitaovana an-tsary sy fanamarihana an-tserasera. Io no fomba tsotra indrindra hizarana, hijerena ary hanaekena ny atiny media amin'ny mpanjifanao sy mpiara-miasa aminao. Ny sarimihetsika dia manohana horonan-tsary, endrika, layout, sary ary antontan-taratasy. Ny tahiry rehetra an'ny mpanjifa dia voatahiry ary voaro amin'ny Internet.
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary, ny sehatra dia sady mamaly no mora ampiasaina. Ny tsara indrindra, dia tsotra ny manazava an-tsary ireo horonantsary na amin'ny fotoana ora na amin'ny toerana tena eo amin'ny efijery. Vao mainka mihombo ny filestage ka afaka ampiasaina mandra-pahatapitry ny taona. Misoratra anarana dia omeo azy io! (Azoko?)
Tags: filestagelahatsary an-tseraserafitaovana famerenana horonantsary an-tseraserafanamarihana an-tsaryvideo review
Len Lisak (@jlisak)
29 Nov 2017 tamin'ny 10:59 PM
Hanoratra aho hilaza aminao momba an'io, saingy hitako fa efa naheno an'izany ianao. Iray volana izao no nampiasako an'io, ary MAHAFALY! Tiako izy izany.
30 Nov 2017 amin'ny 12:18 maraina